ဟာသ – Media9
ဆယ်လီ ဗွီဒီယို ဟာသ
သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို စိတ်မဝင်စားခဲ့တဲ့ Sinon Loresca
[Unicode] ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် Sinon Loresca က သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို ပြန်ချေလိုက်တဲ့ Video file [Zawgyi] ပရိသတ်တြေရဲ့အခ်စ်တော် Sinon Loresca က သင္ဇာဝင့်ကေ်္ကာို ျပန်ခေ်လိုက္တဲ့ Video file
ခေတ်ရေစီး ဆယ်လီ ဖက်ရှင် ဗွီဒီယို ရုပ်ရှင် ဟာသ အနုပညာ
[Unicode] “သူနဲ့စကြိုက်ကတည်းက လက်တွဲမယ်၊လက်တွဲမယ်နဲ့ ပိုက်ဆံကစုလိုက်ရင် စာအုပ်ကပေါက်နေလားမသိဘူး…မပြည့်သေးဘူး”လို့ အချစ်ရေးအကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ‘အောင်မြင့်မြတ်’ [Zawgyi] “သူနဲ႔စၾကိဳက္ကတည္းက လက္တြဲမယ္၊လက္တြဲမယ္နဲ႔ ပိုက္ဆံကစုလိုက္ရင္ စာအုပ္ကေပါက္ေနလားမသိဘူး…မျပည့္ေသးဘူး”လို႔ အခ်စ္ေရးအေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့တဲ့ ‘ေအာင္ျမင့္ျမတ္’
ဆယ်လီ ဖက်ရှင် ဗွီဒီယို ရုပ်ရှင် ဟာသ အနုပညာ
သက်ကြီးလူရွှင်တော်ဘောလုံးအသင်းကို လုံးဝအလျော့မပေးဘူးဆိုတဲ့ Phyu Phyu Htawe နဲ့ Lamin Kabyar
[Unicode] သက်ကြီးလူရွှင်တော်ဘောလုံးအသင်းကို လုံးဝအလျော့မပေးဘူးဆိုတဲ့ ဖြူဖြူထွေး နဲ့ လမင်းကဗျာ [Zawgyi] သက္ႀကီးလူ႐ႊင္ေတာ္ေဘာလံုးအသင္းကို လံုးဝအေလ်ာ့မေပးဘူးဆိုတဲ့ ျဖဴျဖဴေထြး နဲ႔ လမင္းကဗ်ာ
ဆယ်လီ ရုပ်ရှင် ဟာသ အနုပညာ
“ချာလီဘ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Red Carpet Show
[Unicode] “ချာလီဘ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Red Carpet Show ကို ဇူလိုင်လ (၆) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဇာတ်ကားမှာသရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်၊ ရွှေမှုံရတီ၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ ရဲအောင်၊ ခင်လှိုင်၊ ဂျိုကာ တို့ကအဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ [Zawgyi] “ခ်ာလီဘ” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား Red Carpet Show ကို ဇူလိုင္လ (၆) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ သမၼတ႐ုပ္ရွင္႐ံုမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အဲဒီဇာတ္ကားမွာသ႐ုပ္ေဆာင္ ျမင့္ျမတ္၊ ေရႊမွံဳရတီ၊ စိုးျမတ္သူဇာ၊ ရဲေအာင္၊ ခင္လွိဳင္၊ ဂ်ိဳကာ တို႔ကအဓိက ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ခေတ်ရေစီး ဗွီဒီယို ဟာသ
[Unicode] အသက်ငါးဆယ်ကျော် မနုးမနပ်အချစ် ဖြူစင်ပြီးနွမ်းပါးတဲ့ နှလုံးထီရောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ဂုဏ်ပကာသန တွေမမက်မောတဲ့အနှိပ်ခန်းနဲ့အရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်လေးရဲ့အချစ်စစ်ကို ဖော်ကျူးထားတဲ့ ဟဲဗီးဒရမ်မာပိုးစိုးပက်စက်ရိုမန်တစ်ချုံးပွဲချငို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မြန်မြန်ရိုက် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး မအေးအေးသောင်းစီစဉ်သည် ဇာတ်လမ်း – အနောက်တော် ဒါရိုက်တာ ခရစ်စတီးနားခွီ ရဲ့လက်ရာ …… [Zawgyi] အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္ မနုးမနပ္အခ်စ္ ျဖဴစင္ျပီးႏြမ္းပါးတဲ့ ႏွလံုးထီေရာင္းတဲ့မိန္းကေလးတေယာက္နဲ ့ဂုဏ္ပကာသန ေတြမမက္ေမာတဲ့အႏွိပ္ခန္းနဲ ့အရက္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ေလးရဲ ့အခ်စ္စစ္ကို ေဖာ္က်ဴးထားတဲ့ ဟဲဗီးဒရမ္မာပိုးစိုးပက္စက္ရိုမန္တစ္ခ်ံဳးပြဲခ်ငို ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားၾကီး ျမန္ျမန္ရိုက္ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး မေအးေအးေသာင္းစီစဥ္သည္ ဇာတ္လမ္း – အေနာက္ေတာ္ ဒါရိုက္တာ ခရစ္စတီးနားခြီ ရဲ ့လက္ရာ ……
ဆယ်လီ ဗွီဒီယို ရုပ်ရှင် ဟာသ အနုပညာ အမေးအဖြေ
ဦးခင်လှိုင်ဖတ်ပြီးရီနေတဲ့စာအုပ် သူများကိုပေးဖတ်တယ် သူမရီတတ်ဘူး….
[Unicode] ဦးခင်လှိုင်ဖတ်ပြီးရီနေတဲ့စာအုပ် သူများကိုပေးဖတ်တယ် သူမရီတတ်ဘူး…. ဟာသ သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်ပြောပြတဲ့ ဟာသဆိုတာ….။ [Zawgyi] ဦးခင္လိႈင္ဖတ္ျပီးရီေနတဲ့စာအုပ္ သူမ်ားကိုေပးဖတ္တယ္ သူမရီတတ္ဘူး…. ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ခင္လိႈင္ေျပာျပတဲ့ ဟာသဆိုတာ….။
June 19, 2019 June 19, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] ဒါရိုက်တာ ရဲခန့် Media9 မှတင်ဆက်သည်။ [Zawgyi] ဒါရိုက္တာ ရဲခန့္Media9 မွတင္ဆက္သည္။